Jowhar.com : Somali Leader News - News: Baarlamaanka Puntland oo ansixiyay miisaaniyada Puntland oo gaareysa , 679 milyan
April 25 2014 08:35:39
Baarlamaanka Puntland oo ansixiyay miisaaniyada Puntland oo gaareysa $30, 679 milyan
Fadhi uu yeeshay maanta baarlamaanka maamulka Puntland ayaa cod aqlabiyad leh ku ansixiyay miisaaniyada dowlada Puntland oo gaareysa $30, 679 milyan.
Baarlammaanka Puntland ayaa maalmihii la soo dhaafay ka doodayay miisaaniyada ay soo gudbisay wasaarada Maaliyada ee maamulka Puntland.
Fadhiga baarlammaanka ee maanta oo ay soo xaadireen konton mudane ayaa waxaa oggolaatay miissaaniyadan 46 kamid ah ay oggolaadeen halka mudane ka mid baarlamaanka uu diiday labo kalana ay ka aamustay. Hase yeeshee guddoomiyaha baarlamaanka ayaan ka qeybgalin codeynta oo ahayd mid gacan taag ah.
Kal-fadhiga uu Baarlammaanka Puntland ku ansixiyey miisaaniyadda ayaa ahaa mid aan caadi ahayn, wuxana furmay toddobaadkii hore iyadoo arrimaha ugu muhiimsan ee ay xildhibaannadu kaga doodayeen uu ahaa miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2014.
0 Comments · 884 Reads
Jowhar.com756,504 unique visits